Accueil > Gazetin'ny nosy > Hvm: Mitohy ny jadona sy fampihorohoroana ary fandrahonana
Hvm: Mitohy ny jadona sy fampihorohoroana ary fandrahonana
Hanatanteraka fihaonambe any Antsiranana indray ny Hvm rahampitso zoma sy rahafakampitso sabotsy. Azo antoka fa tsy maintsy ny fihomanana amin’ny fifidianana no hatao any.
Toy ny fanabeazana pôlitika maloto norantovin’ny HVm tamin’ireo mpisehatra pôlitika na antoko pôlitika zokiny efa nitana fahefam-panjakana moa dia ampiasaina hanompoana antoko ny fahefam-panjakana, ny mpiasam-panjakana, ny volam-panjakana, ny fitaovam-panjakana. Dia izany no entin’ity antokom-panjakana ankehitriny ity manararaotra anerena sy ampihorohoroana ary andrahonana ny olom-pirenena sy ny mpiasam-panjakana. Tsy maintsy tonga manamaro isa ny mpanotrona ny Hvm amin’ireo roa andro ireo.
Ampiasaina koa ny volam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana hitaomana amin’ny alalan’ny fiara an’ireo olona any anivon’ny fokontany sy kaominina rehetra any, na any Diana amin’ny alalan’ireo distrika mamaritra azy na ny faritr’i Sava. Fa mbola misy koa ny fitaomana an’ireo “mpikarama an’ady pôlitika” avy amin’ny faritany hafa ivelan’Antsiranana.
Izay ange no endrika isehoan’ny ady hevitra pôlitika amin’izao ankatoky ny fifidianana izao e! Mihevitra hatrany ny antoko eo anivon’ny fitondrana fa “azy ny fahefana ary izy irery no manana zo hanao pôlitika” dia ampiasainy amin’izay ilàny azy ny fahefam-panjakana sy ny manodidina izany.
Ny hafa ivelan’ny fitondrana sy izay tsy nanao tokim-panompoana ny mpitondra dia naman’ny very zo tsy mahazo manao pôlitika.
Io fanamparam-pahefana ataon’ny mpitondra io no isan’ny olana fototra eto.
Ny mpitondra dia afaka mampiely hevitra sy manazava ny pôlitika tiany itantanana na efa itondrany ny raharaham-panjakana fa ny hafa voararany tsy mahazo manao an’izany ary na ny haino aman-jerim-panjakana aza dia ataon’ny mpitondra mpihimamba tsy azon’ny hafa itenenaa.
Rehefa ao anatin’ny fotoam-pifidianana ihany vao afaka miteny na mamory vahoaka ny ivelan’ny fitondrana, ary indraindray aza mbola olana be vao afaka manao an’izany. Dia rehefa mba afaka mamory olona alohan’ny vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra ara-pifidianana indray ny ivelan’ny fanjakana dia lazaina fa “manao fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana”.
Tokony tsy hadinoina fa na ny olona tsy mandray anjara amin’izany fifidianana izany, eny na ny manohitra ny fifidianana aza dia manan-jo haneho ny heviny sy hanazava ny tsangan-kevitra ijoroany, ary tokony ho afaka manambara izany na amin’ny haino aman-jerim-panjakana na amin’ny alalan’ny famoriam-bahoaka.
Fa raha iverenana ny tranga karakarain’ny Hvm any Antsiranana rahampitso sy rahafakampitso dia tena hita taratra fa mandrovi-tsihy ry zareo. Toa efa tsinjon’ny Hvm fa tsy ho tafita hitantana ny dimy taona manaraka ry zareo, ka miala vonkina amin’ny fanararaotana farany, dia ny volam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana mbamin’ny mpiasam-panjakana no ampiasaina, araraotina hilalaovana pôlitika. Loza izany !